eNasha.com - सङ्गीत महोत्सवमा तरकारीको डिमाण्ड
सङ्गीत महोत्सवमा तरकारीको डिमाण्ड
तपाइँले भन्नु होला, सङ्गीत महोत्सवमा त सङ्गीतको शान हुनुपर्ने हो, म्युजिकको मान हुनुपर्ने हो- एक्कासि कसरी तरकारीको डिमाण्डको कुरा आयो ?
लौ सुन्नुस्, यूरोपेली राष्ट्र अष्ट्रियास्थित द भियना भेजिटेबल अर्केष्ट्रा गीतार र ड्रम छाडेर लौका, टमाटर र सागतिर आकषिर्त भएका हुन् । यो कुरा चाहिँ हिजै मात्र बेलायतको योर्कशायरमा सम्पन्न हर्डसफिल्ड कन्टेम्पररी म्युजिक फेस्टिभलमा प्रष्टिएको हो ।
यो सङ्गीत महोत्सवलाई संसारभरिका सङ्गीत समीक्षकहरुले नयाँ सङ्गीतको महोत्सव मान्ने गरेका छन् । जसले नयाँ नयाँ शैली र शिल्पको सङ्गीत सिर्जना गर्न सक्यो उसैको 'हाइ हाइ' हुने हुँदा अष्ट्रियाको तरकारी ब्याण्डले चर्चा पाएको हो ।
११ जना युवा सम्मिलित यो तरकारी ब्याण्ड उर्फ भियना भेजिटेबल अर्केष्ट्राले महोत्सवमा 'ककुम्बरफोन' प्रस्तुत गरे । तरकारीकै सहयोगले तिनले हाउस म्युजिकदेखि ज्याज र क्लासिकल सङ्गीतसम्म प्रस्तुत गरेको कुरा डेली टेलिग्राफले जनाएको छ ।
हुन त यो ब्याण्डले अष्ट्रियामा छँदा जुन जुन तरकारीले सङ्गीत पस्कन्थे, कार्यक्रमको समाप्तिमा तिनै तरकारीको सुप समेत खुवाउने गर्दथे । तर यो महोत्सवमा चाहिँ यो सम्भव नदेखेर आयोजकहरुले ब्याण्डको यो इच्छामाथि तुषारापात नै गरिदिए ।
यो अर्केष्ट्राका कसरी जन्म्यो त ? भनेर स्थापकमध्ये एक निकलस गेन्स्टेररलाई सोध्नुभयो उनको जवाफ चाहिँ यो हुनेछ- "हामी एक दिन मिलेर खाना पकाउँदै थियौँ । टमाटर काट्दा एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाज एकनासले आएको पायौँ । तत्क्षण नै हामीलाई किन तरकारी ब्याण्ड नखोल्ने भन्ने विचार सुझ्यो ।"
"त्यसपछि हामीले एकपछि अर्को तरकारी काट्न थाल्यौँ, त्यसलाई हिर्काउन र मोड्न थाल्यौँ । ती सबै प्रयोगले एउटा नयाँ सङ्गीतको जन्म गरायो र आज हामी यो महोत्सवमा उभिएका छौँ", उनले थपे ।
आफ्नो नयाँ सङ्गीतलाई संसारभर पुर्‍याउने र सुनाउने रहर उनीहरुलाई कतिसम्म छ भने वर्षो २० देखि ३० पटकसम्म त उनीहरु संसारभर घुमिरहेकै हुन्छन् ।